Obituary (နာရေးသတင်း – ဆရာကြီးဦးညိုမောင်) : U.N.O.B
Administrator | Nov 11, 2013 | Comments 1
U Nyo Maung – ဦးညိုမောင် (အသက်-၇၈နှစ်)
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ Palm City နေ မဝေေ၀မြင့်၏ မွေးသဖခင် ဆရာကြီး ဦးညိုမောင် သည် ၂၀၁၃ခု နိုဝင်ဘာ ၉ရက် နံနက် ၅နာရီခန့် (New York Time) Palm Beach Gardens Medical Center, Florida တွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်သွားပါသောကြောင့် ရပ်ဝေးမှ သားသမီး၊ ဆွေမျိုး၊ တပည့် သားမြေးများအား သိရှိကြစေရန် ၀မ်းနည်းစွာ အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ဆရာကြီး၏ အထုပ္ပတ္တိ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီး၏ သြ၀ါဒစကား –
3 rd UNOB E.C. meeting in Naples
Tags: maung • nyo • Obituary
B Maran says:
Gone too soon Saya Gyi…
I will cherish the last moment I spent with you. You’ll be missed dearly.